My Singing Monsters 2.3.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.3.1 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း My Singing Monsters
My Singing Monsters ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကြှနျုပျ၏သီချင်း Monsters မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်! သီခငျြးဆိုသူတို့ကိုမွေး, သူတို့ကိုအစာကျွေး, သူတို့ကိုနားထောင်ကြလော့
နဂါးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မြှင့်, ထို့နောက်သူတို့ကိုကြီးထွားကူညီဖို့ရန်သင့်ဂီတ Monster အစာကျွေး။ မိသားစုတစ်စုလုံးအဘို့ဤအခမဲ့ဂီတဂိမ်းထဲမှာပျော်စရာ Monster ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးစုဆောင်းမှုဂရုစိုက်ပါ!
Monsters သီဆို၏အပြည့်အဝကျွန်းတစ်ကျွန်း Create, သင်ပျော်ရွှင် Monster အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမွေးခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အဖြစ်ထို့နောက်သင့်သီချင်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ ဒီဇိုင်းပြီးတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုမျှဝေ, သင့်ကမ္ဘာကသင်လိုချင်သောရုံလမ်းကိုကြည့်လုပ်ထူးခြားတဲ့အလှဆင်တည်ဆောက်! သင်က Monster ကမ္ဘာ့ဖလား၏အံ့သြဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်ခါနာန်ပြည်ကိုစူးစမ်းကိုချစ်မယ်!
ယနေ့ငါ့အသီချင်း Monsters Download - မင်္ဂလာ Monster!
သည်•စုဆောင်း 150 ကျော်ချစ်စရာနဲ့ရယ်စရာ Monsters တက် LEVEL - နဂါးဒါသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များမှာ ... ။
• Discover အသစ်များကိုနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များတစ်နှစ်ပတ်လုံး သည်
ကို Facebook မှာ : https://www.facebook.com/MySingingMonsters
ကိုတွစ်တာ : https://www.twitter.com/SingingMonsters
ကို Instagram ကို : https://www.instagram.com/mysingingmonsters
ကို YouTube ကို : https://www.youtube.com/mysingingmonsters
ကြှနျုပျ၏သီချင်း Monsters! သတိပြုပါကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable ပေးပါ။ အကြှနျုပျ၏သီချင်း Monsters (3G သို့မဟုတ် Wi-Fi) ကစားရန်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်လိုအပ်သည်။
www.bigbluebubble.com/support သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ် Options ကိုမှ> ထောက်ပံ့သွားသဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့် Monster-Handlers တွေကိုနှင့်အတူထိတွေ့ရယူပါ: အကူအညီ & အတွက်အထောက်အပံ့ ။
My Singing Monsters အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
My Singing Monsters အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
My Singing Monsters အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
My Singing Monsters အား အခ်က္ျပပါ
appsmag စတိုး 9.71k 2.01M
My Singing Monsters ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း My Singing Monsters အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Big Blue Bubble
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.bigbluebubble.com/privacy-policy/
လက်မှတ် SHA1: 0B:2B:A2:A2:E1:49:70:62:D7:AB:EB:19:8E:60:3C:71:C5:68:3E:CB
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Test Key
အဖွဲ့အစည်း (O): Big Blue Bubble Inc.
My Singing Monsters APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ